အဘိုးဖြစ်သူမှ (၁၃) နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစ်ညမ်းကားများပြပြီး သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ရန်​ ကြံစည် – MEDIALANN
အဘိုးဖြစ်သူမှ (၁၃) နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစ်ညမ်းကားများပြပြီး သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ရန်​ ကြံစည်
အဘိုးဖြစ်သူမှ(၁၃)နှစ်အရွယ် မြေးမလေးအား ညစ်ညမ်းကားများပြပြီး ကြံစည်မှုဖြစ်
၂၂.၆.၂၀၁၉ – ၁၅၃၀
တအိမ်​ထဲအတူအိပ်​​နေစဉ်​ သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ရန်​ ကြံစည်​​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​
အမှုဖြစ်​စဉ်​မှာ…..ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး အ​နောက်​ ပန်း​တောင်းမြို့နယ်​ ဥသျစ်​ပင်​စခန်းအ​နောက်​ဘက်​ ၂၆မိုင်​ခန့်​အကွာ​ညောင်​ကျိုးအုပ်​စုကျွဲ​လေး​ကျေးရွာ​နေ​ဒေါ်သန်းသန်းရီတိုင်​တန်းသည်​မှာ ၂၁.၆.၂၀၁၉ (၁၆း၀၅)အချိန်​​တောင်​ကုတ်​မြို့နယ်​သ​ပြေ​ကျေးရွာအုပ်​စု​နေ အ​ဒေါ်ဖြစ်​သူ​ဒေါ်​သောင်းရီထံသို့ပို့ထား​သောသမီးငယ်​ မ​အေးသက်​​ကျော်​ ၄နှစ်​မှာ​နေမ​ကောင်းဖြစ်​၍သွား​နေစဉ်​ ကျွဲ​လေး​ကျေးရွာ​နေအိမ်​တွင်​ သမီးဖြစ်​သူမဝင်းဝင်း​မော်​နှင့်​ဖခင်​ဖြစ်​သူ ဦးထွန်းသိန်း ၅၁နှစ်​ အတူရှီပြီး အိပ်​​နေစဉ်​
ထို​နေ့ည ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်​ခန့်​ သမီးဖြစ်​သူမဝင်း​ဝင်း​မော်​အိပ်​​နေသည့်​​ချေရင်းခန်းထဲသို့ ခေါင်းရင်းအခန်းတွင်​အိပ်​​နေ​သော ဖခင်​ဖြစ်​သူ ဦးထွန်းသိန်းမှ အခန်းထဲဝင်​၍ သမီးဖြစ်​သူအား လုပ်​နိုးကာ လက်​ကိုင်​ဖုန်းထဲရှိ ဗီဒီယို ညစ်​ညမ်းအပြာကားများအားကြည့်​ခိုင်းပြီး သမီးထမီအားအတင်းဆွဲချွတ်​ကာ အ​ပေါ်မှတက်​ခွ၍ သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ရန်​လုပ်​​ဆောင်​ခဲ့သည်​ဟုကြားသိရသဖြင့်​
မသန်းသန်းရီမှာသ​ပြေမှကျွဲ​လေးရွာသို့ပြန်​လာပြီးသမီးဖြစ်​သူနှင့်​ရွာမှအခြားသူများအား​မေးမြန်းရာ ဖခင်​ဖြစ်​သူဦးထွန်းသိန်း ၅၁နှစ်​မှသမီးဖြစ်​သူအားသားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ရန်​ ထမီချွတ်​တက်​ခွစဉ်​ မဝင်းဝင်း​မော်​ ​အော်​ဟစ်​ထွက်​​ပြေးလာသည်​ကို တရွာထဲ​နေ ကို​နေယု​အောင်​. ကိုတင်​​ဇော်​ဦး.ကို​မောင်​​မောင်​. ​ဒေါ်ပဲတို့နှင့်​အတူ ​တွေ့မြင်​ကြားသိခဲ့​ကြောင်း
ထို​နေ့ညမဝင်းဝင်း​မော်​မှာ အိမ်​သို့မပြန်​ရဲသဖြင့်​ကိုစိုးကြီး မသန်းစီတို့​နေအိမ်​တွင်​ညအိပ်​ခဲ့ရ​ကြောင်းသမီးဖြစ်​သူ​ပြောပြ၍သိရှိခဲ့သဖြင့်​ အထက်​ပါဖြစ်​စဉ်​နှင်​ပါတ်​သက်​ပြီးအ​မေဖြစ်​သူ မသန်းသန်းရီမှ သမီးဖြစ်​သူ မဝင်းဝင်း​မော်​ ၁၃ နှစ်​အား သားမယားအဖြစ်​ပြုကျင့်​ရန်​ကြံစည်​သူ ဖခင်​ဖြစ်​သူ ဦးထွန်းသိန်း ၅၁နှစ်​အား တရားဥပ​ဒေအရအ​ရေးယူ​ဆောင်​ရွက်​​ပေးပါရန်​ တိုင်​တန်းသဖြင့်​ ဦးထွန်းသိန်းအား ဥသျှစ်​ပင်​ရဲစခန်းမှ (ပ)၆၆/၂၀၁၉ ရာဇသတ်​ကြီးဥပ​ဒေပုဒ်​မ ၃၇၆/၅၁၁ ဖြင့့်​ ၂၂.၆.၂၀၁၉ (၁၈၀၅)အချိန်​အမှုအားလက်​ခံဖွင့်​လှစ်​ပြီး ဒုရဲအုပ်​သိန်း​ကျော်​မှ အှုအားစစ်​​ဆေး​ဆောင်​ရွက်​လျှက်​ရှိ​ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
အဘိုးဖွဈသူမှ(၁၃)နှဈအရှယျ မွေးမလေးအား ညဈညမျးကားမြားပွပွီး ကွံစညျမှုဖွဈ
တအိမျထဲအတူအိပျနစေဉျ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ရနျ ကွံစညျကွောငျး သတငျးရရှိပါသညျ
အမှုဖွဈစဉျမှာ…..ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး အနောကျ ပနျးတောငျးမွို့နယျ ဥသဈြပငျစခနျးအနောကျဘကျ ၂၆မိုငျခနျ့အကှာညောငျကြိုးအုပျစုကြှဲလေးကြေးရှာနဒေျေါသနျးသနျးရီတိုငျတနျးသညျမှာ ၂၁.၆.၂၀၁၉ (၁၆း၀၅)အခြိနျတောငျကုတျမွို့နယျသပွကြေေးရှာအုပျစုနေ အဒျေါဖွဈသူဒျေါသောငျးရီထံသို့ပို့ထားသောသမီးငယျ မအေးသကျကြျော ၄နှဈမှာနမေကောငျးဖွဈ၍သှားနစေဉျ ကြှဲလေးကြေးရှာနအေိမျတှငျ သမီးဖွဈသူမဝငျးဝငျးမျောနှငျ့ဖခငျဖွဈသူ ဦးထှနျးသိနျး ၅၁နှဈ အတူရှီပွီး အိပျနစေဉျ
ထိုနညေ့ ၁၁း၀၀ နာရီအခြိနျခနျ့ သမီးဖွဈသူမဝငျးဝငျးမျောအိပျနသေညျ့ခရြေငျးခနျးထဲသို့ ခေါငျးရငျးအခနျးတှငျအိပျနသေော ဖခငျဖွဈသူ ဦးထှနျးသိနျးမှ အခနျးထဲဝငျ၍ သမီးဖွဈသူအား လုပျနိုးကာ လကျကိုငျဖုနျးထဲရှိ ဗီဒီယို ညဈညမျးအပွာကားမြားအားကွညျ့ခိုငျးပွီး သမီးထမီအားအတငျးဆှဲခြှတျကာ အပျေါမှတကျခှ၍ သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ရနျလုပျဆောငျခဲ့သညျဟုကွားသိရသဖွငျ့
မသနျးသနျးရီမှာသပွမှေကြှဲလေးရှာသို့ပွနျလာပွီးသမီးဖွဈသူနှငျ့ရှာမှအခွားသူမြားအားမေးမွနျးရာ ဖခငျဖွဈသူဦးထှနျးသိနျး ၅၁နှဈမှသမီးဖွဈသူအားသားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ရနျ ထမီခြှတျတကျခှစဉျ မဝငျးဝငျးမျော အျောဟဈထှကျပွေးလာသညျကို တရှာထဲနေ ကိုနယေုအောငျ. ကိုတငျဇျောဦး.ကိုမောငျမောငျ. ဒျေါပဲတို့နှငျ့အတူ တှမွေ့ငျကွားသိခဲ့ကွောငျး
ထိုနညေ့မဝငျးဝငျးမျောမှာ အိမျသို့မပွနျရဲသဖွငျ့ကိုစိုးကွီး မသနျးစီတို့နအေိမျတှငျညအိပျခဲ့ရကွောငျးသမီးဖွဈသူပွောပွ၍သိရှိခဲ့သဖွငျ့ အထကျပါဖွဈစဉျနှငျပါတျသကျပွီးအမဖွေဈသူ မသနျးသနျးရီမှ သမီးဖွဈသူ မဝငျးဝငျးမျော ၁၃ နှဈအား သားမယားအဖွဈပွုကငျြ့ရနျကွံစညျသူ ဖခငျဖွဈသူ ဦးထှနျးသိနျး ၅၁နှဈအား တရားဥပဒအေရအရေးယူဆောငျရှကျပေးပါရနျ တိုငျတနျးသဖွငျ့ ဦးထှနျးသိနျးအား ဥသြှဈပငျရဲစခနျးမှ (ပ)၆၆/၂၀၁၉ ရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ ၃၇၆/၅၁၁ ဖွငျ့ ၂၂.၆.၂၀၁၉ (၁၈၀၅)အခြိနျအမှုအားလကျခံဖှငျ့လှဈပွီး ဒုရဲအုပျသိနျးကြျောမှ အှုအားစဈဆေးဆောငျရှကျလြှကျရှိကွောငျးသတငျးရရှိပါသညျ။